नक्कली र सक्कली सुन कसरी चिन्ने ? यस्तो छ चिन्ने तरिका (फोटो सहित) « Sajha Page
नक्कली र सक्कली सुन कसरी चिन्ने ? यस्तो छ चिन्ने तरिका (फोटो सहित)
काठमाडौँ । नेपालमा सुनको कारोबार १२ महिना नै हुने गर्दछ । विवाहको सिजन होस् या कुनै पर्व, सुनको माग सधैं नै उच्च रहन्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक ग्राहक जागरुक हुन् जरुरी छ कि खरिद गर्न लागेको सुन सक्कली हो या नक्कली किनकी आज पनि नेपालका अधिकांस मानिसहरु सक्कली र नक्कली सुन छुट्याउन सक्दैनन ।
त्यसैले सुन किन्नु भन्दा अघि धेरै सोचविचार र जाँच गर्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ । सुन किन्दा सक्कली वा नक्कली छुट्याउन केही सरल प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिन्छ जसको मद्दतले ग्राहकहरु आफू ठगिन बाट बच्न सक्छन ।
» म्याग्नेट टेस्ट(Magnet Test):
यसको लागि हार्डवेयर पसलमा गई चुम्बक लिएर आउनुहोस् र सुनको गहना नजिक लगेर हेर्नुहोस । यदि सुनको गहना चुम्बकमा टाँसिएमा तपाईको सुन सक्कली होईन । यदि टाँसिएन भने तपाईको सुन सक्कली हो । किनकी सुन चुम्बकीय धातु होईन ।
» सेरामिक प्लेट टेस्ट(Ceramic Plate Test):
यस टेस्टको लागि एक सेतो सेरामिक प्लेट लिनुहोस् । यदि तपाईको घरमा छैन भने बजारबाट ल्याउनुहोला । त्यस पछि सुनको गहनालाई उक्त प्लेटमा रगड्नुहोला । यदि उक्त प्लेटमा कालो निशान देख्नुभएमा तपाईको सुन नक्कली हो र यदि हल्का सुनौलो रङ देखेमा तपाईको सुन सक्कली हो ।
» वाटर टेस्ट(Water Test):
यसको लागि सबैभन्दा सरल तरिका वाटर टेस्ट हो । यसको लागी एक गहिरो भाँडामा २ गिलास पानी हाल्नुहोला र त्यसमा सुनको गहना राख्नुहोला । यदि तपाईको सुन तैरिन्छ भने तपाईको त्यो नक्कली हो, यदि सुन डुबेर भाँडाको सतहमा बसेको छ भने सुन सक्कली हो ।
» बाइट टेस्ट(Bite Test):
सुन सक्कली हो या नक्कली हो भनेर थाहा पाउन सुनलाई दाँतको बीचमा राखी टोक्नुहोला । यदि तपाईको सुन सक्कली हो भने त्यसमा दाँतको निशान देखिन्छ । किनकी सुन एक अत्यन्तै नरम धातु हो । यो टेस्ट आरामले गर्नुहोला, बेस्सरी दाँतले दबाउदा सुन टुट्न पनि सक्छ ।
» पसिना टेस्ट:
तपाईले महसुस गर्नुभएको होला कि एक या दुईको सिक्का पसिनाले भिजेमा एक अनौठो गन्ध आउँछ । तर सक्कली सुनको पसिनामा त्यस्तो गन्ध भने आउदैन ।